3 Wasiir oo Gaarey Kismaayo iyo Banaabax Dowladda looga soo horjeedo oo Kismaayo ka dhacey – idalenews.com
3 Wasiir oo Gaarey Kismaayo iyo Banaabax Dowladda looga soo horjeedo oo Kismaayo ka dhacey
Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo, kadib markii ay shalay ka baaqdeen safar ay ku tagi lahaayeen magaaladaas.
Booqashada wafdigan ayaa la xiriirta xaaladaha ka taagan Kismaayo, iyadoo lagu wado inay kula kulmaan Garoonka diyaaradaha Kismaayo Saraakiisha Ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda.
Wafdigan ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Kismaayo Gudigii uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha ee Xildhibaanada ahaa ee horay ugu sugnaa Kismaayo iyo Taliyaha ciidamada xooga dalka iyo Abaanduulaha ciidamada.
Arrimaha ay u tageen wafdigan ayaa ah mid la xiriira dhinaca ammaanka iyo sidii ciidamada dowladda dib u habeyn loogu sameyn lahaa, isla markaana Saraakiisha Kenya ee AMISOM ka socda ay uga qeyb qaadan lahaayeen sugida ammaanka wafuuda dowladda ee ku sugan Kismaayo.
Lama oga inay wafdigan uu hogaamiyo C/xakiin Fiqi la kulmayaan dhinacyada isku haya magaalada, inkastoo xildhibaanadii horay ugu sugnaa magaalada aanay la kulmin dhanka Axmed Madoobe.
Booqashada wafdiga uu hogaaminayo Wasiirka gaashaandhiga ayaa ku soo aadaya, iyadoo maanta banaan baxyo waa weyn ay ka dhaceen magaalada Kismaayo iyo deegaano ka tirsan Jubooyinka, kaasoo looga soo horjeeday dowladda Soomaaliya iyo mowqifka IGAD ka qaateen arrimaha Jubooyinka.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira xiisad dhinaca siyaasada oo ka dhalatay dhismaha maamul ay yeelato Jubooyinka oo ah mid la isku heysto, dowladda Soomaaliyana diidan tahay maamul aan loo marin habka sharuucda u degsan dalka uu ka howl galo deegaanada Jubooyinka.
Taageerayaasha hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe ayaa maanta ka dhigay Banaanbaxyo ay ku dalbanayeen faragalinta in laga daayo Maamulka Jubbaland, Magaalooyinka Kismaayo, Afmadow iyo Badhaadhe oo ka tirsan gobolkaasi Jubbada Hoose.
Qaar kamid ah Banaanbaxayaasha oo Warbaahinta kula hadlay goobihii ay iskugu soo baxeen isla markaana cabirayay dareenkooda ayaa sheegay inay aad uga xunyihiin faragalin ay sheegeen Dowladdu inay ku hayso Maamulka Jubbaland ee Hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe.
Waxay ugu baaqeen Madaxwaynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka daayo Faragalinta Jubbaland isla markaana uu taageero Maamulkooda.
Hadaba Qaybaha Hoose ka dhagayso Banaanbaxayaasha oo dareenkooda Cabiraya, waxaana ay kala Joogaan Magaalooyinka Kismaayo, Badhaadhe iyo Afmadow
Taliyaha Xoogga Dalka Somalia Jeneraal Indhoqarshe iyo Abaanduulaha XDS Jeneraal C/risaaq Khaliif oo maalintii 3aad ku xaniban Garoonka Diyaaradaha Kismaayo